जिन्स किन्दा के कुरामा ध्यान पुर्‍याउने? :: Setopati
जिन्स किन्दा के कुरामा ध्यान पुर्‍याउने?
जिन्स सबैभन्दा पहिले अमेरिकी मजदुरले प्रयोग गरेका थिए।
बलियो र टिकाउ हुने भएकाले यो छोटो समयमै निकै लोकप्रिय भयो। विस्तारै यसलाई आरामदायक पहिरन र फेसनका रूपमा प्रयोग गरिन थालियो र आज आएर जिन्स फेसनको अपरिहार्य पाटो बनिसकेको छ।
बजारमा धेरै प्रकारका जिन्स पाइन्छन्। जिन्स किन्दा विशेष ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ। नराम्रो जिन्स परेमा खुइलिने, चाँडै पातलिने, तन्किएर नराम्रो हुने जस्ता समस्या आउन सक्छन्।
जिन्स किन्दा सामान्य केही कुरा मात्र ध्यान दिन सकियो भने पनि राम्रो पाइनुका साथै सुन्दर पनि हुनसक्छ।
जिन्स किन्दा सबैभन्दा पहिले त्यसमा भएको कटनको मात्रा जाँच गर्ने। जिन्समा कटनको मात्रा ९० देखि सय प्रतिशत भएन भने त्यो आरामदायक हुँदैन।
जिन्समा भएको कटनको मात्राले यसको मूल्य निर्धारण गर्छ। कटनको मात्रा कम भएमा मूल्य कम र मात्रा बढी भएमा मूल्य बढी हुने डिजाइनरहरू बताउँछन्।
आफ्नो शरीरको बनावटको अनुसार जिन्स छनौट गर्नुपर्छ। कस्तो प्रकारको जिन्स किन्ने भन्ने विषयमा अन्यौल पर्न सक्छ। पातलो खुट्टा भएकालाई स्किनी जिन्स सुहाउँछ। तर धेरै नै पातलो शरीर हुनेले स्किनी जिन्स नलाउन डजाइनरहरू सुझाव दिन्छन्।
त्यस्तै, मध्यम शरीर भएकालाई आर्क शेप्ड र कर्भ्ड शेप्ड जिन्स सुहाउँछ। खुट्टाको तुलनामा तिघ्रा मोटो हुनेका लागि टेपर्ड (हिप र तिघ्राको भाग खुकुलो, मोता भने साँघुरो) राम्रो विकल्प बन्न सक्छ। अग्लो उचाइ भएकाका लागि बुट कट वा बेल बटम्स जिन्स राम्रो विकल्प हुन्छ भने कर्भ्ड जिन्स पनि राम्रो हुन्छ। तर, उचाइ कम भएकालाई यस्तो सुहाउँदैन।
जिन्स किन्दा त्यसको रङमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। जिन्स रगड्दा हातमा रङ लागेजस्तो देखियो भने त्यो चाँडै खुइलिन सक्छ।त्यस्तै, चेन, बटन पनि राम्ररी चेक गर्नुपर्छ। सस्ता र कम गुणस्तरका चेन र बटन चाँडै बिग्रन्छन्।
धेरै वर्ष स्टकमा रहेका जिन्स चाँडै बिग्रिन्छन्। त्यसैले, नयाँ आएका जिन्स किन्नुपर्छ। बजारमा चलेका राम्रा ब्रान्डका नाममा अनेकौं नक्कली जिन्स पाइन्छन्। त्यस्तामा सक्कली भनेर पैसा हाल्नुभन्दा अघि त्यो बिक्री हुने पसल, त्यसको वास्तविक बजार मूल्य सबै बुझ्नुपर्छ। जहाँ पायो त्यहाँ ब्रान्डेड जिन्स पाइयो भनेर किन्न हुँदैन।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत १३, २०७७, १५:११:००